21 Days Speaking Challenge | Hysan Education
သင့်ရဲ့ တစ်သက်လုံး အားနည်းနေတဲ့ English Speaking ကို 21 ရက်အတွင်း သူများတွေအားကျရအောင်အရှိန် ထိုးပြောင်းလဲမယ်!
သင့်ရဲ့ တစ်သက်လုံး အားနည်းနေတဲ့ English Speaking ကို 21 ရက်အတွင်း သူများတွေအားကျရအောင်အရှိန် ထိုးပြောင်းလဲမယ်! 💡
သင့်ရဲ့ တစ်သက်လုံး အားနည်းနေတဲ့ English Speaking ကို 21 ရက်အတွင်း သူများတွေအားကျရအောင်အရှိန် ထိုးပြောင်းလဲ မယ်! 💡ဘယ်လောက်တော်တဲ့သူဆီကသင်သင် သင်လက်တွေ့အသုံးမချရင် ဘယ်သောအခါမှ ပညာရပ်တစ်ခုကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မြောက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ 🙅‍♀️
Englishစာကို ကျွမ်းကျင်ချင်ရင် သင့်ကိုယ်သင် Limit လုပ်နေတဲ့ “ငါမလုပ်နိုင်ပါဘူး ကြောက်တယ်”ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကို ဖျောက်ဖျက်ပြီးကြိုးစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ 📌“မိမိ အကြောက်ဆုံး အရာ က အလုပ်သင့်ဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်”📌
သင်က အခုအချိန်မှာ English စာ တိုးတက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး။ သင်တန်းတွေလည်း အများကြီးတတ်ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့် ထိရောက်မှုလည်း သေချာမတွေ့ရဘူး။ English စကားပြောကို ပြေပြေပြစ်ပြစ်နဲ့ Smartကျကျ ပြောချင်တယ်။ Englishစာကို ဖတ်တာလည်း အဆင်ပြေတယ်၊ ရေးတာလည်း အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမယ့် စကားပြောမှာရင် အာ အင်...နဲ့ ထစ်နေတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် အမြဲတမ်း Confidence မရှိနေဘူး
မိမိကိုယ် ကို အမြဲ တမ်း နောက်တိုးပြီး နေနေတာ အလုပ်မှာဆို English စာမကောင်းလို့ အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှူံးနေတယ်။
ဒီလို အတွေးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင် အခုပဲ စတင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အလျှင်အမြန်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ သင် တခြားသူတွေထက်ခြေတစ်လှမ်း နောက်ကျကျန်သွားနိုင်ပါတယ်နော်! 🏃‍♀️
📌အမှန်တကယ် လေ့လာမယ် ဆိုရင် မခက်ပါဘဲ ထိထိရောက်ရောက် စလုပ်ဖို့ တွန်းအားတစ်ခုလိုနေတယ်ဆိုရင်တော့ “(21)ရက်”အတွင်း Hysan Professionalတွေ နဲ့ လမ်းညွှန်မှု Hysan ရဲ့ Unique Teaching methods စံချိန်မီ သင်ရိုးတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ English စာ ကို အရှိန်အဟုန် 10ဆတိုးမြှင့်အောင် ပြောင်းလဲအောင် Transformလုပ်ပေးဖို့ New Program အသစ်လေးတစ်ခုကို ယူဆောင်လာပါတယ်။ 🎁✨
‘21’ ရက် ဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝမှာ အလေ့အထ တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့ အတိုဆုံးအချိန် လို့ တစ်ချို့က ဆိုကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ (21)ရက်ဆိုတာ သင့်ရဲ့ English Skills တွေကို တစ်ရှိန်ထိုးမြှင့်တင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ အချိန်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ 🍀
ဒါကြောင့် ဒီCourse လေးကို “(21) Days Speaking Challenge” လို့ခေါ်ပါတယ်။ နာမည်လေးအတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိန်ခေါ်ပြီး
တိုးတက်အောင် ကြိုးစားနိုင်မယ့် Challenges လေးဖြစ်ပါတယ်။🌱
21DSC is notacourse , It isalife changing program 💡
21DSC က သင်တန်းတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ သင်အင်္ဂလိပ်စာအပေါ် ထားတဲ့ စိတ်ထားတွေ လေ့လာပုံတွေ ကိုပြောင်းလဲပေးမဲ့ Program ဖြစ်ပါတယ်။💡အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ သိသာတဲ့ ပြောင်းလဲမှု ကို ရစေမှာဖြစ်ပါတယ် ။
မိမိအသံအနိမ့်အမြင့် (Intonation)၊အသံထွက် (Pronunciation) စတဲ့ Speakingရဲ့ “အခြေခံကျတဲ့ Skill” တွေ သိသိသာသာ တိုးတက်လာမယ်။ နေ့စဉ်သုံး စကားပြောတွေ ( 21 Daily Conversation topics about yourself ) နှုတ်ဆက်တဲ့ Greetings တွေကနေ စပြီးမိမိ ကိုယ်ကို ကောင်းကောင်းထုတ်ဖော် ပြောဆိုနိုင်အောင် Topics 21 ခု ကို “သဘာဝကျကျ လွယ်လွယ်ကူကူ” လေ့လာ ပြောဆို နိုင်မှာပါ။
Hysan ရဲ့ Professional Teachers များကိုယ်တိုင် သင့်ကို “အလေ့အထ” (Habit)တစ်ခုဖြစ်တဲ့အထိ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်လမ်းညွှန်ပေးမှာဖြစ်လို့ program လေးပြီးသွားတာနဲ့ Englishစာကို “အရင်ကထက် 10 ဆ ယုံကြည်မှု ရှိအောင်” ပြောဆိုလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Presentationတွေ၊ Role Playတွေလိုမျိုး ပျော်စရာကောင်းပြီး လက်တွေ့ဘဝမှာ အသုံးဝင်မယ့် Activityတွေနဲ့အတူ သင်ကိုယ်တိုင် Taskတွေကိုစိန်ခေါ်လုပ်ဆောင်သွားရမှာမို့ အမှန်တကယ် “Action-based ဖြစ်တဲ့ ရလဒ်” တွေကို သင်ကိုယ်တိုင် အမြန်ဆုံးတွေ့မြင်လာရမယ်။
ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့Hysanကနေ အဓိက Encourageလုပ်တဲ့ Learning methodတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Peer Learning” ကနေလည်း ကိုယ်နဲ့တူတူကြိုးစားကြမယ့် Networkတစ်ခုနဲ့အတူ တိုးတက်ပြောင်းလဲ နိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ မိမိရဲ့ video recording 21 ခု ပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် မိမိကြိုးစားမှု များ ကို အမြဲတမ်းကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်နေမှာပါ ။
Train ပေးသွားမယ့် Teacherတွေရဲ့ Profile တွေကိုလည်းအောက်မှာ အသေးစိတ် ဖော်ပြထား ပါတယ်။
Tr. Thiri Y
Pusan National University ကို Korea Government Exchange Scholarship Program နဲ့သွားရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး NGO အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Teach for ASEAN မှာလည်း အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ အများကြီးရှိတဲ့ Teacher ကတော့ Teacher Thiri Y ပဲဖြစ်ပါတယ်။ IH Bangkok မှ Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)နဲ့ TKT, Teaching Knowledge Test (Cambridge University) ကိုရရှိထားသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Teacher ကတော့ Hysan Education မှာ General English Classes ​တွေကိုအဓိကထားပြီး သင်ကြားပေးနေတဲ့ Lead Teacher တစ်​ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်
Tr. Hsu Myat
Tr Hsu Myat သည် Yangon University of Foreign Languages (YUFL) မှ Master of Arts in English နှင့် Bachelor of Arts in English ရထားပြီး စာသင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ (၉) နှစ်ကျော် ရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Teaching Knowledge Test(TKT, Cambridge University) နဲ့ Diploma in TESOL (LTTC, UK) ကို ရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်
ယခုလောလောဆယ် Hysan Education မှာ Accelerator Classကို ဦးဆောင်ကြားပေးတဲ့ Teacher တစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်
Tr ချောမြတ်စန္ဒီက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာဂုဏ်ထူးတန်းမှာ အထူးပြု သင်ယူထားသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
Hysanမှာ လက်ရှိ social club နဲ့ explorer class တို့ကို သင်ကြားပေးနေပြီး TKT candidate တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Dr. Sai Phone Myat Lwin
ဒေါက်တာစိုင်း ကတော့ (Accelerated Learning) ဘာသာရပ်အကြောင်းအရာ တစ်ခု ကို မြန်မြန်လွယ်လွယ် မှတ်မိပြီး လေ့လာသင်ယူနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု ပြီး Students တွေရဲ့limiting belief ကို ပျောက်ပြီး ကျော်လွှာအောင် နည်းလမ်း ပြသပေးမဲ့ Learning Coach အနေနဲ့ လေ့ကျင့်ပေးသွားမှာပါ ။
မိမိ English စာ ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲချင်ပြီဆိုရင်တော့ Hysanရဲ့ (21) Days Speaking Challenge ကို အမြန်ဆုံး စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီနော်။
Speaking Challenge Registration ကို “Novemberလ (၃) ရက်နေ့”အထိပဲ လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကြေးကတော့ (99000)ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Starting Date - Nov 8
သတင်းကောင်းလေးကတော့ အခုအချိန်ကနေစပြီး Nov (3)ရက်နေ့အထိ Register လုပ်တဲ့ သူတွေအတွက် “Early Bird Promotion” အနေနဲ့
✧(89000)✧ ကျပ်သာ ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။🥳
ပြီးတော့ စဉ်းစားနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောရဦးမယ်..
လေ့လာရင်းနဲ့ အဆင်မပြေတာရှိခဲ့ရင်လဲ 1 ပတ်အတွင်း 100% Refund လုပ်ပေးတာမို့လို့ သူငယ်ချင်းအတွက် အရှုံးမရှိတာမို့ စဉ်းစားစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့..
Hysan မှာ အခြားသူငယ်ချင်းပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်လောက် အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ ဘဝတွေကို တိုးတက်ပြောင်းလဲအောင် ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်.. နောက်ထပ် တိုးတက်ပြောင်းလဲမယ့်သူက သင်ပဲလား? သင်ဖြစ်မယ် ဆိုရင်တော့ အခုပဲ အောက်ပါ Linkလေးမှာ စာရင်းပေးသွင်းပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တိုအတွင်း ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကို စတင်လိုက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ 🙌